Riflọ ọrụ mgbapụta nke Centrifugal - China Ndị na-emepụta mgbapụta centrifugal, ndị na-eweta ngwaahịa
KQW Single Stage kwụ Centrifugal mgbapụta
Ejiri n'ime ikuku oyi, kpo oku, mmiri mmiri, ọgwụgwọ mmiri, usoro jụrụ oyi na mmiri, nrugharị mmiri mmiri, na mmiri oyi na-adịghị emebi emebi na njem ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ na mpaghara nke mmiri, nrụgide na ogbugba mmiri. Siri ike anaghị akwusi na mmiri mmiri bụ ihe, olu ya anaghị gafere 0.1% nke otu olu, nha urughuru <0.2mm.
D / MD / DF Multi-Stage Centrifugal mgbapụta
D Horizontal Multi-Stage Centrifugal Pump, MD eyi nke na-eguzogide ọgwụ multi-stage centrifugal pump for coal mine and DF Corrosion-Resistant Multistage Centrifugal Pump. N'ihi iji teknụzụ dị elu na imewe, D / MD / DF nwere ọtụtụ uru. Enwere ike iji ha rụọ ọrụ dị iche iche.
DG / ZDG Ji esi mmiri ọkụ mgbapụta
DG usoro nke multistage nkewapụta nke ikuku centrifugal na-eji nkụja esemokwu iji jikọọ ụzọ mmiri, akụkụ etiti na ngalaba ntanye n'ime ngwaahịa dum. Ọ na-eji na ji esi mmiri ọkụ oriri mmiri na ndị ọzọ elu okpomọkụ mmiri dị ọcha. Usoro a nwere ọtụtụ ụdị ngwaahịa dị iche iche, ya mere ọ nwere ọtụtụ ngwa. Ọzọkwa, ọ nwere arụmọrụ ka mma na arụmọrụ dị elu karịa ọkwa larịị.
KQDP / KQDQ Booster mgbapụta
Nlereanya KQDP / KQDQ bụ nfuli nkwụnye ọkụ dị iche iche. Nchekwa ike, nchebe gburugburu ebe obibi, nchebe na ntụkwasị obi bụ uru ya bụ isi. Ọ nwere ike ịnyefe mmiri mmiri dị iche iche, enwere ike iji ya mee ihe na mmiri, nrụpụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe, njem ụgbọ mmiri mmepụta ihe, ikuku ikuku ikuku, ogbugba mmiri n'ubi, wdg. ọnọdụ.
KQSN Split Case mgbapụta
Nnukwu mmiri, ụlọ nchekwa ọkụ, ikuku ikuku na-ekesa mmiri, mmiri na-ekesa mmiri na sistemụ injinịa, ikuku mmiri na-ekpo ọkụ, mmiri na-ekpo ọkụ, mmiri mmiri na mmiri na mmiri, mmiri mmiri, osisi mmiri, akwụkwọ akwụkwọ, osisi ike, ọkụ osisi ike, osisi nchara, osisi kemịkalụ, ọrụ nchekwa mmiri, inye mmiri na mpaghara mmiri, wdg.
Tụkwasị na nke ahụ, iji ihe ndị na-eguzogide corrosion ma ọ bụ ihe na-eguzogide ọgwụ nwere ike ibufe mmiri mkpofu mmepụta ihe, mmiri mmiri, na mmiri ozuzo nke nwere ihe ndị a kwụsịrị.
KQGV Akụrụngwa Na-enye Mmiri (Mgbapụta Mgbapụta)
A na-ejikarị ya eme ihe na ụlọ ndị dị elu, obodo, ụlọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ, ọdụ ụgbọ elu, ngalaba ụlọ ahịa, họtel, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ wdg.
KZA / KZE / KCZ Petrochemical mgbapụta
A na-ejikarị ha eme ihe nnụcha mmanụ, petrochemical, ụlọ ọrụ kemịkal, ụlọ ọrụ nhazi unyi, ụlọ ọrụ akwụkwọ, ụlọ ọrụ mmiri, ụlọ ọrụ eletriki, nri, ọgwụ, nchekwa gburugburu ebe obibi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
KQL Direct-single-in-in-single Single Stage Vertical Centrifugal Pump
Model KQL bụ Direct-coupled na-line single stage vetikal centrifugal nfuli. A na-ejikarị ha eme ihe maka usoro ikuku na ikpo ọkụ. Nhazi ihe iche iche na-enye ya uru nke ntụkwasị obi dị elu na arụmọrụ dị elu.
XBD Firefighting mgbapụta
A na-ejikarị ya arụ ọrụ ọkụ ọkụ na ala dị iche iche na nkwụsị ọkpọkọ.